အဆိုပါကြိုးမ Hare: တစ်ဦးကဗုဒ္ဓဘာသာ Jataka ပုံပြင်များ
အဆိုပါကြိုးမ Hare ၏ Jataka ပုံပြင်များ
by ဘာဘရာ O 'Brien
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး Hare လရှိ Is
နောက်ခံသမိုင်း: အဆိုပါ Jataka ပုံပြင်များ
အဆိုပါ Jataka ပုံပြင်များ ဗုဒ္ဓရဲ့ယခင်ဘဝပြောပြအိန္ဒိယကနေပုံပြင်များဖြစ်ကြသည်။ တချို့ကပုံပြင်များလူ့ပုံစံအတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့ယခင်ဘဝကိုပြောပြပေမယ့်အများအပြား Aesop ၏ဒဏ္ဍာရီဆင်တူတိရိစ္ဆာန်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓကသူကိုမကြာခဏတစ်ဦးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံပြင်များ, သူ၏ယခင်ဘဝအသက်တာ၌သေးတစ်ဦးဗုဒ္ဓမဟုတ်ခဲ့သောကြောင့် "Bodhisattva ။ "
အဆိုပါကြိုးယုန်၏ဤပုံပြင် (အ Sasa Jataka, ဒါမှမဟုတ် Jataka 308 ကဲ့သို့) ပါဠိကို Canon နှစ်ဦးစလုံးနှင့် Arya SURA ၏ Jatakamala အတွက်အချို့မူကွဲအတူပေါ်လာသည်။
လထဲမှာအကျွမ်းတဝင်က Man - - အချို့သောယဉ်ကျေးမှုမှာမွန်း၏ Crater မျက်နှာ၏ပုံသဏ်ဌာဖွဲ့စည်းအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်ပေမယ့်အာရှတိုက်မှာ, တကယုန်သို့မဟုတ်ယုန်၏ပုံသဏ်ဌာစိတ်ကူးဖို့ပိုဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကယုန်လရှိသည်အဘယ်ကြောင့်၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါကြိုးမ Hare ၏ပုံပြင်များ
Long ကလွန်ခဲ့တဲ့, အ Bodhisattva တစ်ယုန်အဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကစပျစ်နွယ်ပင်နှင့်ချိုမြိန်ရိုင်းသစ်ခွတက်ပြီးကဝိုင်း, ပျော့ပျောင်းသောနုသောမြက်ပင်များနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအတန်ကြာခံစားသူတို့တွင်တစ်ဦး leafy သစ်တော၌နေ၏။ အဆိုပါသစ်တောသီးအပွတွေနဲ့ကြွယ်ဝသောကြီး lapis lazuli အဖြစ်အပြာအဖြစ်သန့်စင်သောရေစီးရာမြစ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်။
သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာခရီးကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုထံမှထုတ်ယူသူတွေကို - ဤသစ်တောကုန်လှည့်လည်တဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား acestics သူတို့အခြားသူများထံမှတောင်းပန်အစားအစာအပေါ်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ ထိုကာလ၏လူများအထွတ်အမြတ်တာဝန်ဖြစ်သည်သန့်ရှင်းသောလှည့်လည်ရန်ဆွမ်းများပေးကမ်းဆင်ခြင်၏။
တစ်မျောက်တစ်ဦးနဂါးနှင့်ဖျံ - - သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပညာရှိတို့၏ယုန်ကြည့်သူ bodhisattva ယုန်အဆွေခင်ပွန်းသုံးယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူကသူတို့ကို, ကိုယ်ကျင့်တရားဥပဒေများကိုစောင့်ရှောက်သောသန့်ရှင်းသောနေ့ရကျစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဆွမ်းပေးခြင်း၏အရေးပါမှုကိုသင်ပေးတယ်။ သန့်ရှင်းသောနေ့ကချဉ်းကပ်အခါတိုင်း, အယုန်တစ်စုံတစ်ဦးကများစားစရာဘို့သူတို့အားမေးမွနျးပါလျှင်သူတို့ကိုမိမိတို့အဘို့ကိုစုဝေးစေခဲ့ပြီးအစားအစာကနေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ရက်ရက်ရောရောပေးခဲ့သောသူ၏မိတ်ဆွေများကသတိပေးဆုံး။
Sakra, နတ်၏သခင်အရှင်၏အထွတ်အထိပ်အပေါ်စကျင်ကျောက်များနှင့်အလင်း၏သညျမဟာနန်းတော်ကနေလေးမိတ်ဆွေများကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ် တောင်ပေါ်မှာ Meru အဘိဓါန် များနှင့်တဦးတည်းကိုသန့်ရှင်းသောနေ့ခြင်းတွင်, ထိုသူတို့၏သီလကိုစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
ထိုနေ့ရက်သည်လေးမိတ်ဆွေများကိုအစားအစာကိုရှာဖွေကွဲကွာ။ အဆိုပါဖျံတစ်မြစ်ကမ်းပါးပေါ်မှာခုနစ်အနီရောင်ငါးတွေ့၏ အဆိုပါနဂါးပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သော curdled နို့အိုးကိုတှေ့လြှငျ, မျောက်သစ်ပင်များထံမှသရက်သီးကိုစုဝေးစေ။
Sakra ဟာတစ်ဦးဗြဟ္မာ၏ပုံစံ, ဒါမှမဟုတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ကို ယူ. , သူကဖျံမှ သွား. "ဟုက F riend ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်၏။ ငါသည်ငါ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မီငါအစားအစာလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်မလား?" ထိုအခါဖျံဟာဗြဟ္မာမိမိန့်ညက်စုဝေးခဲ့ခုနစ်လုံးကိုငါးပူဇော်ကြ၏။
ထိုအခါဗြဟ္မာတို့သည်နဂါး သွား. "ဟုက F riend ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်၏။ ငါသည်ငါ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မီငါအစားအစာလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်မလား?" ထိုအခါနဂါးတို့သည်ဗြဟ္မာပုပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နှင့်မိမိန့်ညက်မှုအတွက်ရှိသည်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီးနို့ curdled ။
ထိုအခါဗြဟ္မာမျောက်မှ သွား. , "ဟုက F riend ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်၏။ ငါသည်ငါ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မီငါအစားအစာလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီနိုင်မလား?" ထိုအခါမျောက်ဟာဗြဟ္မာသူသညျမိမိအစာစားခြင်းမှရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုခဲ့အရည်ရွှမ်းသရက်သီးပူဇော်ကြ၏။
ထိုအခါဗြဟ္မာတို့သည်ယုန် သွား. စားစရာဘို့တောင်းပေမယ့်ယုန်အစားအစာပေမယ့်သစ်တောအတွင်းကြီးထွားလာစိမ်းလန်းစိုပြေမြက်မျှရှိခဲ့သည်။ ဒီတော့ Bodhisattva မီးတည်ဆောက်နိုင်ရန်ဗြဟ္မာကိုပြောသည်, မီးကိုမီးရှို့ခံခဲ့ရသည့်အခါသူက "ငါမစားရန်သင့်အားပေးစေခြင်းငှါအလျှင်းမရှိပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်!" ဟုပြောသည် ထို့နောက်ယုန်မီးထဲသို့မိမိကိုမိမိပစ်ချ၏။
Sakra, ဆဲတဲ့ဗြဟ္မာအဖြစ််၏, မိန်းမောတွေဝေခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူကယုန်ကိုမီးရှို့မခံခဲ့ရဒါမှမီးချက်ချင်းအအေးသွားရစေ၏, အဲဒီနောက်ကြိုးနည်းနည်းယုန်ကသူ့စကားမှန်ပုံစံဖော်ပြခဲ့တယ်။ "ချစ်လှစွာသောယုန်" ဟုသူက "သင်၏သီလခေတ်ကာလမှတဆင့်ကိုအောကျမေ့ပါလိမ့်မည်။ " ဟုပြောသည် ပြီးတော့ Sakra အားလုံးကြည့်ဖို့အတှကျမွန်း၏ဖျော့မျက်နှာပေါ်မှာပညာရှိတို့၏ယုန်ရဲ့သဏ္ဍာန်ခြယ်။
Sakra တောင်ပေါ်မှာ Meru အဘိဓါန်အပေါ်သူ၏အိမ်သို့ပြန်ပြီးလျှင်, လေးခုမိတ်ဆွေများကိုသူတို့ရဲ့လှပသောတော၌ရှည်လျားပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့သည်။ ဤနေ့ရက်ငှါ, မွန်းမှာတက်ကြည့်ရှုသူများသည်ကြိုးယုန်၏ပုံသဏ်ဌာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါစတုတ္ထ Noble အမှန်တရား
အဆိုပါ 40 လွတ်မြောက်နယ်မြေသူများကိုနှင့်မိုင် Bhago
ယောနသန်သည် Edwards ကအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ဓမ္မဘီး (Dharmachakra) သင်္ကေတ
Julius Boros: ရေနစ်မြုပ်၏ဂေါက်သီးခန်းမကိုသိရယူပါ
1804 ကနေလက်ရှိမှ Dance ၏ကျော်ကြားအမျိုးသမီးများနေ့
Sara အီဗန်: တစ်ဦးကနိုင်ငံစတားရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဘောလုံးကစား: တစ် fullback ထောင်ချောက်ကို run ဖို့ဘယ်လို
အီတလီကြိယာ Guardare များအတွက် conjugation ဇယား
အနိမျ့ SAT ရမှတ်?
1990 ခုနှစ်မတ်တပ်ရပ်-up, ဟာသ
VB.NET မှ VB6 converting
ငါ Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့ရယူနိုင်သောသငျ့သလော
တစ်ဦး Paintball ဂွန်ဘယ်လိုအတော်များများဒုတိယအ Per ဘောလုံးရိုက်နိုင်ပါသလား?
Hip-Hop ၏သမိုင်း: 1925 Now ကိုမှ
Boyz II ကိုအမျိုးသားများအတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
နာတာလီဝုဒ် Starring5Classic ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်